(Barcelona) 02 Luuliyo 2020. Halyeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa muujiyay sida uu kaga yaabay go’aankii uu qaatay tababare Quique Setién kulankii Atletico Madrid, kaddib markii uu soo galiyay xiddiga reer France ee Antoine Griezmann daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta.
Rivaldo ayaa si kulul u dhaleeceeyay tababare Quique Setién wuxuuna ku tilmaamay shaqsi layaab leh, isagoo xusay in Antoine Griezmann uu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka, isla markaana aan macno sameyn Karin inuu keeno daqiiqada 89-aad, mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan kooxda Barcelona ee xilli ciyaareedkan.
Halyeeyga reer Brazil ayaa sidoo kale cadeeyay in ku tiirsanaanta Antoine Griezmann ee daqiiqadaha ugu dambeeya ay ka dhigan tahay in maamulka kooxda Barcelona ay qalad ku aheyd inay ku qarash gareeyaan saxiixiisa qiimo dhan 120 million euros, wuxuuna aaminsan yahay in go’aanka macalinka uu ahaa mid qaldan.
Haddaba wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeyga reer Brazil ee Rivaldo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Bedelkan wuxuu si cad u muujinayaa inay wax ka qaldan yihiin kooxda, sababtoo ah inaadan ku tirsanaanin Antoine Griezmann kulankan muhiimka ah, waxay ka dhigan tahay inuusan ku jirin heerkiisa ugu fiican, xitaa inuu ahaa saxiix lagu qaldamay xagaagii”.
“Ma fahmin, wuxuu koobka adduunka kula soo guuleystay xulkiisa qaranka France, sidoo kale wuxuu ahaa xiddiga koowaad ee kooxda Atletico Madrid sanado badan, wuxuuna heshiis rikoor ah ugu dhaqaaqay Barcelona, wuxuu ciyaarayaa daqiiqado yar kulan weyn oo sidaan oo kale ah, waa go’aan layaab leh”.